Soo dejisan Free Video Call Recorder for Skype 1.2.68.831 – Vessoft
Soo dejisan Free Video Call Recorder for Skype
Free Video Call taariikhqorihii ee Skype – software ah si ay u qoraan Skype ugu baaqaysaa in tayo sare leh. Software The Qori wadahadalo video in mp4 iyo wadahadalo audio qaabab mp3. Free Video Call taariikhqorihii ee Skype u saamaxaaya in ay gacanta billaabin, istaag oo ku dhameysan duubo wicitaanada ama reserved record automatic. Software waxa ku jira hababka oo awood in ay qoraan tirada a xulay of dhigteen. Free Video Call taariikhqorihii ee Skype kuu ogolaanayaa inaad reserved channels audio, ballaarinta video ah, FPS iyo goobta video ee shaashadda.
Xogta iyo baaqyada Skype ee tayo sare leh
Hababka kala duwan ee duubo dhigteen
Records audio ka calls video
Meeshay of rikoorka automatic
Free Video Call Recorder for Skype Software la xiriira: